Ndị a bụ 'smartwatches' nke ga-emelite gam akporo 8.0 Oreo | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ 'smartwatches' nke ga-emelite gam akporo 8.0 Oreo
Ọ bụ ezie na ọ bụ ahịa nke Apple na-achịkwa, ọ bụ eziokwu na Di iche iche nke gam akporo Wear smartwatches mejuputara otutu onu ogugu nke ighota. Ikekwe, ndị na-ada gị ụda bụ ndị Motorola, ASUS ma ọ bụ LG bịanyere aka na ya. Ugbu a, ịbụ ngwa ejiji, ụdị ndị ama ama dịka Fossil ma ọ bụ Louis Vuitton abawanyela n'ụgbọ ahụ na ụzọ ndị ọzọ.
Dị ka na mkpanaka na mbadamba, ese n'okpuru gam akporo Wear sistemụ na-enwetakwa mmelite oge niile, yana nsụgharị ọhụrụ. Na onye na-esote ịpụta ga-adabere na gam akporo 8.0 Oreo. Dị ka ị maara nke ọma, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ụdị ndị a, mgbanwe ndị ahụ edochaghị anya dị ka ndị ọzọ. N'ezie, a na-anabatakarị ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ikpo okwu.
Na ụdị ọhụrụ ahụ, a na-atụ anya mmụba na mmiri nke ọrụ, yana nkwụsi ike na ndozi na batrị ahụ. Ikekwe ihe kachasị dị ịrịba ama ga-abụ ikike mkpọchi ihuenyo nke smartwatch. Ma ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha nwere ike iguzogide mmiri n'okpuru mmiri. Ma ọ bụrụ na ihuenyo na-arụ ọrụ, ọ nwere ike ibute ụfọdụ keystroke na mberede. Google ewepụtala ndepụta gọọmentị nke ndị otu enwere ike imelite ya na ndị ga-echere. Nke a bụ ndepụta zuru ezu. N'ezie, a ga-enwekwa ụdị ndị ga-anọ n'okporo ụzọ ahụ.
1 'Smartwatches' nke nwere ike imelite gam akporo 8.0 Oreo
2 'Smartwatches' na-echere ịnata gam akporo 8.0 Oreo na izu ndị na-abịanụ
'Smartwatches' nke nwere ike imelite gam akporo 8.0 Oreo
Fosil Q Venture
'Smartwatches' na-echere ịnata gam akporo 8.0 Oreo na izu ndị na-abịanụ
Casio WSD-F10 Smart N'èzí Elekere
Dizel zuru nche
Emporio Armani ejikọtara
Fosil Q Control
Fossil Q Onye nyocha
Fosil Q Onye guzobere 2.0
Fosil Q na-awagharị
Hugo BOSOS BOSS Aka
Michael Kors nweta Bradshaw
Michael Kors nweta Dylan
Michael Kors nweta Grayson
TAG Heuer Tag ejikọtara Modular 45
Tommy Hilfiger 24/7 Gị
Dị ka ị hụworo, ọ nweghị ụdị Motorola ma ọ bụ ASUS dị ugbu a. Nke a apụtaghị na ha anaghị anọgide na-enweta mmelite mmelite, mana ha ga-edozi maka gam akporo 7.0.
Ozi ndi ozo: Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ndị a bụ 'smartwatches' nke ga-emelite gam akporo 8.0 Oreo
Etu ị ga - esi mara awa ole ị gere egwu na Spotify n'oge 2017